Dhageyso:-Muxuu Guddoomiye Mursal ka yiri Maqaamka G/Banaadir? - Radio Risaala: Somali News Online
Home AUDIO Dhageyso:-Muxuu Guddoomiye Mursal ka yiri Maqaamka G/Banaadir?
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa sheegay in Golaha Shacabka ay ka go’an tahay in uu hirgalo maqaam gaar ah oo uu yeesho Gobolkan Banaadir.
Waxaa uu sheegay in aysan jirin dad ka horyimid n Muqdisho ay hesho matalaad rasmi ah,hayeeshee hadallada qaar si kala duwan loo fasiray,waxaana uu sheegay in ay muhiim tahay in Gobolka Banaadir si sharci ah uu matalaad ku helo.
“Qof walba oo muwaadin Soomaaliyeed ah xaq ayuu u leeyahay in uu ka hadlo arrinta Gobolka Banaadir maadaama uu nasiib u helay inay noqoto Caasimadda Ummadda Soomaaliya,taasina waa waajib na wada saaran ayuu yiri” Guddoomiye Mursal.
Ugu dambeyn waxaa uu sheegay in ilaa laga helayo maqaam uu yeesho Gobolka Banaadir aan laga heri doonin addka diidana la iska hor leexin doono.
Previous articleGanacsiga Soomaalida Kenya oo hoos u dhacay
Next articleSaraakiil gaartay Guriceel & Wafdi ku wajahan